April 3, 2021 Xuseen 21
Puntlandtimes (XARFO)-Cutubyo katirsan ciidanka difaaca Puntland ayaa maanta tababar loogu soo xiray xerada tababarada ciidanka Abqaale oo dhacda duleedka degmada Xarfo ee gobolka Mudug, halkaasi oo ay muddo tababar ku qaadanayeen.
Qorya-ha ciidanka wataan waa loox! Loox iyo koofiyad jaandi ah miyaa ciidan beleed ciidan qaran ka dhigi? kkk kkk kkk
@ yoocada ciidanku dagaal kuma jiraan isumana diyaarinayaan tabar ayay dhamaysteen, dunida ilbaxda ahi qoryo caadiya ciidanka laguma tababaro waxaa lagu taba baraa fake guns waayo waa khatar qoryuhu waa dab lagumana cayaaro dab, si gaar ah ayaa loo baraa isticmaalka qoryaha iyo ciladbixintooda. Puntland waxay qaadatay standard kaad aduunku wax u tababaro meeshan ma joogaan maleeshiyaadkii SNM ee gar xejis iyo hawar awal u kala fadhiyay ee uu muuse dameer horjoogaha u ahaa. Waan ogahay markaad arakto horumar ka Puntland iyo hiigsigeeda ciidanka sida xad dhaafka ah tababarku ugu socdo ayaad johorada xaadhaan Burcana ka qaxdaan ee caadi iska dhig balo ma jidhee.
Shut your mountb SOMALILAND ha sheegan labo dhex maleh
Mushahar 3 jibaaran… kkkkkkkkkkk
Hooyadaa miyaa kugu tiri waa loox?
Danta guud says:
Dhiladii eeyduurka Suuliland Xaargeysa ugu weyneyde Habar-gusjeclo oo wasmo doon ah
Alwaaxaas bay hooyadaa iyo eeyduurka Suuliland Xaargeysa oo dhan siilka iyo futada Ka galinyan KHANIIS EEYDUUR
Inangumeed inangumeedadu dhaleen iidoor cabsi iyo argagax ayay la joogi layihiin, muuse jaahil iyo saleebaan gaal Gen Morgan ayay ku qarwaan. Waana la dilay waa nala fara xumeeyay ayay ku calaacalaan inta lafo xayawaan soo fagaan marna dhuusadooda lagama joogi karo gun gun dhashay Iidoor afqarmuune naagahoodu dhilooyin. Hargaysa ayaan tagaa markaan wasmo u baahdo kuwa la qabo xitaa waa laguu keenin including yoocada hooyadiis.
waar dumarka ka xishood oo wax isku fala,nin waliba dumar waa la dhasheen,waa hooyo,waa ma hurtaddi kuu dhaxdiyo,mid aan qabto iho booyadda laga masaalaa, ma macaasho dumarka kii aflagaadeeyaa.
Farmaajo maanta wuxuu lasoo degay boqollaal gawaarida gaashaaman ee Turkigu sameeyo. Puntland waa inay sii diyaarsataa, haddii aysan haysanna degdega u raadsataa qoryaha lidka taangiyada iyo beebeeyada si ugu burburiso haddii ay xadkeeda usoo gudbaan.
Majiro ciidan qaran. Waa maleeshiyo markii horena xulusho lagu qoray, haddana u shaqeeya ninka 100ka dollar siiya.
Bintigirl way faan badan tahay, qoriga looxa ah is tus ayay u soo qaadatay , xitaa raasaaas ma haysato.
Dadka ha caayin SOMALILAND ha sheegin weceladii kacaankii ba tahay
Qoriga looxa ah ay bintigirl wadato , rasaas kuma jidho.
Kkk waa ciidan iigu sawir ah mushahar suga. Ciidan beeleed dowlada mushahar ku qataan qabiilka
Farmaajo waa la wasin isaga iyo canaasiirta cashqsanba
Waa qof aan arak waxa uu aaminsanyahay,oo Soomaali oo dhani ja soo horjeedo waa figrada ku dhisan gooni u goosatda ee deegaanada dhexe ee gobolada waqoiyi ee Soomaaliya,naa dadkaa dhinac ka raac oo beenta iyo riyada ka bax adigo inta la narin habaabiyey.
Puntland iyana waxa ay u baahantahay is bedel dhab ah oo ka fayow musumaasuqa maamulka Deni iyo xulufadiisa.
Puntland guul,horumar iyo cadaalad iyo sharciga oo sareeya.
Maxaa ciyaalka Isaaq website kan ku faangaday mar alaale markii ciidan ka DARAAWIISHTA laga hadlo bal u fiirsada yaabkan CIIDANKA DARAAWIISHTA HADII LAGA HADLO AMA TOBABAR LOO SOO XIDHO CIYAALKA HARGEYSA BAA COMENT CAY KA DHAANSHA HALKAAN SU’AASHU MAXAA DHIBAYA?
Wa ceeb, goormma Majerteen & Warsaangli noqdeem DARAWIISH? Darawiish waa la yaqaan, they are somalilanders and not Puntland, go back to history.
Nuurani dumarka waxba haka shegin wayo ceeb maleh aniga labada dhanba ama somali waa isugu kaymid dumarkodu wayno dhaxeeyan wana layska guursada marka taas raali galin ayanka bixiyey hablaha sharafta leh e ad falagadeysay tan difaca puntland sikale uduifac wll.Cidankan wan uhambalyeynaya guuleysta gesiyashenoow waxan ad ula yaba mararka qaar somalidaba cidan aya logu talo galay malaha wayo askarigii 3 ama 6 bilood ayuu wax kale sobaxaya fahan deg deg ah manshallah.
Nuuraani… waa cunug wanaagsan naag naaso waaayn oo sexy ah ayaa dhashay.
Nuuraani.. hooyadii naasaha ayay caano ku leedahay. waa sexy.